eNasha.com - चाउचाउको राष्ट्रियकरण
आमा! भोक लाग्यो !
रारा चाउचाउ खाउ
आमा! स्कुलमा खाजा के लाने ?
वाईवा॒ई चाउचाउ खाउ
अफिस क्यानटिनमा ?
मायोस को मारामार
लेकाली को बाहार
भात नरुच्दा ?
बिरामी हुँदा ?
पकाउन अल्छी लाग्यो ?
चाउचाउ भुलुक्क उमाल्यो
छोरा कान्लामाथि काहालिएर कराए ?
२ रुपे को हा-हा चाउचाउ
बियरसँग सन्याक्स के ?
ठुला घरमा ?
साना घरमा ?
जसरी दालभातबिना एउटा नेपालीको पहिचान पूरा हुँदैन, त्यसैगरी चाउचाउ पनि हाम्रो जीवनको एउटा पहिचान भईसक्यो । टिलिली टल्किने प्लास्टिक, त्यसभित्र घुम्रेर बसेका मैदाका मसिना त्यान्द्रा, सँगसँगै आउने मसला, खुर्सानी अनि तेलका प्याकेट। प्याट्ट भाँचेर मुखमा हाल्दा कुरुम-कुरुम गर्ने चाउचाउबिना हाम्रो मेनु नै पुरा नहुने भईसक्यो। केटाकेटीलाई अल्मल्याउन होस् या ठूलाका खरिएको भोक मेटाउन- चाउचाउले प्रमुख भूमिका खेल्ने गरेको छ। विषेश गरी गृहिणीका लागि त चाउचाउ एउटा बरदाननै भएको छ। सजिलै बन्ने र सस्तोमा टर्ने चाउचाउको उत्पादन ठ्याप्प रोकिने हो भने सबभन्दा गाह्रो त यिनै गृहिणीलाई हुन्छ। यसो त यसको महिमा गृहिणीलाई मात्र थाहा नभई भरखर नेपालमा भएको ठूलो युद्धमा भागिदार भएका सेनाहरुलाई पनि तातो सुपको याद ताजै छ होला। यसको महिमा गाउनेमा प्रवासी नेपालीहरु पनि पर्छन्। विदेश पुगेकाहरु पनि मिस् गर्ने चिउरा, तामा, भटमाससँगै चाउचाउ पनि पर्छ।
सजिलै सम्झिने र सम्झिनै नसकिने नाम भएका पचासौँ चाउचाउ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छ्यापछ्यापी देखिन्छन्। पान पसलदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर अनि कुनै कुनै नाम त देशको सीमा पार गरेर भारत अनि अन्य मुलुकमा समेत् परिचित भईसकेका छन। विभिन्न नाम, दाम, अनि स्वादका चाउचाउले नेपाली जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पारिसक्यो। झन् चाउचाउसँगै आउने लोभलाग्दा हिराका हार, सुनका हात्ती, खेलौना आदिले त पुरस्कारकै लागि पनि खानेहरुको सँख्या कम छैन ।
चाउचाउ भनेको जन्क फुड हो भनेर हल्ला गर्नेहरुको हल्ला पनि हिजोआज कम भईसकेको छ । त्यस्ता हल्लाबाज मध्ये कोहि-कोहिले त चाउचाउ खान पनि कम गरिसकेका थिए। तर मिठो र सजिलो चाउचाउको अघि केही नलाग्ने देखेर घेरैले चाउचाउ नखाने ब्रत तोडे। घेरै खाए रोग लाग्नसक्ने कुराहरुलाई छेउलगाई नेपालीहरुले आफ्नो चाउचाउ प्रतिको स्नेह दर्शाईसकेका छन्। चाउचाउमाथि लागेका यस्ता आरोपहरुलाई पन्छाउन अब त चाउचाउमा भिटामिन-सीटामिन थपिएर आउन थालेको छ। यसोगरेर उत्पादकहरुले चाउचाउका दुश्मनहरुका मुखमा चाउचाउको बुझो लाईदिएका छन्।
सबैलाई चाहिने, सबैको दैनिक आवश्यकता भएको चाउचाउलाई अब एउटा उपाधि नै दिनुपर्ने बेला भईसकेको छ। चाउचाउलाई दैनिक उपभोग्य बस्तुको लिस्टमा नून, चामल, दालपछि राष्ट्रिय खानाको सूचिमा दाल भातसँगै राखेमा यसले नेपाली पेटलाई पुर्याएको सेवाको सही मुल्याङकन हुनेछ।